“Wax xiiso ah uma qabo inaan ku laabto Man United ”Dean Henderson - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha “Wax xiiso ah uma qabo inaan ku laabto Man United ”Dean Henderson
“Wax xiiso ah uma qabo inaan ku laabto Man United ”Dean Henderson
Goolhayaha kooxda Manchester United Dean Henderson ayaa lagu soo waramayaa inuusan dooneynin inuu ku laabto kooxda marka uu dhameysto amaahda uu kula joogo Sheffield United dhamaadka xagaagan.
22 jirkaan ayaa amaah ku qaatay labadii xilli ciyaareed ee u dambeysay Bramall Lane, halkaasoo uu ka caawiyay kooxdiisa Blades inay ku guuleysataan usoo baxista Premier League.
Sheffield United ayaa haatan fadhida kaalinta lixaad ee kala sarreynta, hal boos iyo hal dhibic ayay ka sareeyaan kooxda Manchester United, laakiin Henderson ayaa lagu wadaa inuu ku laabto naadigiisa dhamaadka ololahaan.
Sikastaba, Manchester Evening News ayaa sheegeysa in Henderson kaliya uu ku laaban doono Old Trafford hadii loo dammaanad qaado inuu yahay dooqa koowaad ee goolka xili uu wali joogo David de Gea.
De Gea ayaa ka mid ahaa xiddigihii United ee waxqabadka sameeyay inta badan waqtigiisii kooxda, laakiin su’aalo ayaa la iska weydiinayaa qaabkiisa labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Goolhayaha reer Spain ayaa shabaqa ilaashaday shan jeer oo Premier League ah xilli ciyaareedkaan 2019-20 ilaa iyo haatan, halka Henderson uu si weyn uga sarreeyo goolhayaha reer Spain.
Previous articleKulan Caawa laga Ciyaari lahaa Horyaalka Ingiriiska oo dib loo dhigay
Next articleWafdi ka socda Dowladda oo gaarey Magaalada Baydhabo
Maamulka gobolka Banaadir ayaa Magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal lagu soo aruurinaayo Xoolaha gaar ahaan Lo'da oo Magaalada Nadaafadeed hoos u dhigtay sidda uu...